Iflethi okanye indlu ekwicomplex 5 - "Marie-Louise" - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex 5 - "Marie-Louise"
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChristian
Iflethi okanye indlu ekwicomplex "Marie-Louise" ikumgangatho wesibini kwaye inamagumbi okulala ahlukileyo kunye negumbi lokuhlala elinesofa eyibhedi. Igumbi lokulala linebhedi elala abantu ababini nebhedi enye, enokutshintshwa ibe yibhedi elala abantu ababini. Kwindawo yokuhlala kukho indawo yokutyela, i-TV kunye nekhitshi elincinci elineoveni. Igumbi lokuhlambela lineshawa nendlu yangasese. Iflethi okanye indlu ekwicomplex eyi-60 miliyoni ilungele abantu abayi-4 ukuya kwabayi-6.
Kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukusuka eLake Hainer yindawo esandul 'ukulungiswa, amawaka aliqela m2 knight' s manor Kahnsdorf. Indlu yasemaphandleni ineeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezintlanu ezinefenitshala kubantu abayi-27 (izilwanyana zasekhaya azivumelekanga). Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezinamagumbi aliqela ziyahluka ngokwendlela nesitayile ibe ziyazifikelela izinto ezininzi ezifunekayo. Ukususela ngoMatshi 2016, ivenkile yokutyela iGut Kahnsdorf ibisemgangathweni. Ngoko ke, ngamaxesha athile ukuphazamiseka komculo kunokwenzeka ngenxa yemibhiyozo efanayo.
Indlu yasemaphandleni iKahnsdorf yakhiwa ngo-1907 nguForker-Schubauer owayekade ebizwa ngokuba yiForker-Schubauer kwaye kunye nendlu yaseSchiller eyakhiwe ngejuwelari ye-idyllic yabantu abafuna uxolo kunye namagcisa. Ukususela ngo-2013, indawo yokuqala ibuyiselwe kunye nechibi elitsha kunye nokudibana nepaki ekufutshane.
Ichibi iKahnsdorf yaseLake Hainer, ekumgama weemitha eziyi-200 kuphela, ikumema ukuba uphumle elunxwemeni, uqubhe, uhambe ngesikhephe uze wenze imidlalo yamanzi eyahlukahlukeneyo.
Idolophu encinci yaseKahnsdorf ngokuqinisekileyo kufanelekile ukuyibona kwaye nembali yayo inomdla nje! Malunga neminyaka engama-30 eyadlulayo le lali yayisesemendweni womgodi ovulekileyo kwaye eneneni yayifanele ukudilizwa. Kodwa emva kokuwa koDonga, imingxuma evulekileyo eseleyo yahlaziywa kakhulu, yatshintshwa kwaye yakhukuliswa ngokuyinxenye. Oku kubangele amachibi amathathu ajikeleze iKahnsdorf: iHainer kunye neHaubitzer See, ezivulekele abakhenkethi, kunye neKahnsdorfer See, eshiywe ngokupheleleyo kwindalo.
Kwindawo ebizwa ngokuba yiLagune Kahnsdorf, abanye abantu babucala bafezekise iphupha labo lokuba nendlu yabo echibini kwiminyaka yakutshanje. Kodwa nesikolo sokuhamba ngesikhephe, indawo yokurenta isikhephe kunye neekhefi ezincinci kunye neeresityu zihleli kwibhanki entsha.
Embindini weKahnsdorf unokufumana iifama ezininzi, i-forge endala kunye nendawo yokusila yangaphambili yamanzi. I-manor, eyahlaziywa ngo-2014, kunye neendawo zayo zokuhlala ezihloniphekileyo kunye nepaki ehambelanayo ne-pool imema ukuba uhlale. Ungazonwabisa ngokuzonwabisa kwi-Culinary Schillercafé okanye kwindawo yokutyela yaseGut Kahnsdorf engummelwane.
Ngelishwa, akukho mathuba okuthenga eKahnsdorf, kodwa kukho iindawo zokutyela kunye neecafe ezincinci. Ukuthenga, ndincoma idolophu yesithili saseBorna, ekumgama wemizuzu eli-10 kuphela kwaye inedolophu entle endala eneevenkile ezincinci. Endleleni eya eLeipzig kukho idolophu encinci yaseRötha ene-Edeka kunye neekhemesti (malunga nemizuzu eyi-8 ngemoto).
Umtsalane okhethekileyo kwindawo:
- Deutzen indawo yokujonga kwindawo esebenzayo yaseSchleenhain opencast mgodi (umgama malunga ne-11 imiz)
-Ipaki yokuzonwabisa yaseBelantis (umgama omalunga ne-18 min)
- Iphuli yokuzonwabisa ye-RIFF, i-Bad Lausick (umgama omalunga ne-28 min)
-ILeipzig eneendawo zokutyela ezininzi, iivenkile, indawo yogcino-zilwanyana enkulu, i-panometer, iVölkerschlachtdenkmal nokunye okuninzi. (Umgama malunga ne-25 min)
Abasebenzi bam baya kukuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo. Iofisi yethu ikwizibuko yaye ilawulwa ngoMvulo ukuya kutsho ngolwesiHlanu ukususela ngeye-10 kusasa ukuya kweye-12 emva kwemini nangesi-2 emva kwemini ukuya kweyesi-5 malanga.
Abasebenzi bam baya kukuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo. Iofisi yethu ikwizibuko yaye ilawulwa ngoMvulo ukuya kutsho ngolwesiHlanu ukususela ngeye-10 kusasa ukuya kweye-…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Neukieritzsch